Madaxwayne Qoor Qoor oo Qaaday Tallaabooyin uu ku mideeyay Galmudug [Sawirro] | Kalshaale Warar Sugan iyo Suugaan
Madaxwayne Qoor Qoor oo Qaaday Tallaabooyin uu ku mideeyay Galmudug [Sawirro]
Mar 25, 2020 - 3 Aragtiyood
Madaxwaynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye [Qoorqoor] ayaa duleedka magaalada Dhuusamareeb Maanta Martiqaad ugu sameeyay Qaar kamid ah Siyaasiyiinta, Xildhibaano ka tirsan DFS iyo Waxgarad kasoo jeeda deegaanada Galmudug.
Madaxwaynaha Galmudug ayaa Qaaday Tallaabooyin uu ku Xalinayo Khilaafkii deegaanada Galmudug, Wuxuuna Martiqaad u fidiyey siyaasiyiin markii hore kasoo horjeeday Doorashadiisa oo ay kamid yihiin Xildhibaan Fiqi, Mahad salaad iyo Kamaal Guutaale oo kamid ahaa Mushariixinta Galmudug, Wuxuuna sidoo kale Maanta Banaanka magaalada ugu sameeyay Martiqaad la isku Xog Waraystay.
“Martiqaad gobeed oo uu nagu soo dhoweeyey madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye duleedka caasimadda Galmudug.
Daawaynta dhacdooyinka siyaasadeed ee la soo dhaafay waxay aasaas adag u noqonayaan dhismaha Mustaqbal iyo horumar loo aayi karo.
Haddii reer Galmudug ad-adayga iyo tafaraaruqa astaan looga dhigay, waxaa u bilowday waa cusub oo tanaasul iyo wadajir summad u yahay. “ Ayuu yidhi Xildhibaan Fiqi oo ka hadlay Kulanka iyo soo dhowaynta ay kala kulmeen Madaxwayne Qoor-Qoor.
Reer qoor qoor waa in la aqonsada galmudug waxay u bahan tahay nabad iyo hotumar
Galmudug waa lagu kala baxay ama waa lagu kala adkaaday but who is next?
Galmudug waa lagu kala baxay ama waa lagu kala adkaaday.but who is next?